Roahina Desoxymethyltestosterone vovoka (3275-64-7) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Anabolika Steroids / Serasera testosterone volo / Desoxymethyltestosterone vovoka
SKU: 3275-64-7. Sokajy: Serasera testosterone volo, Anabolika Steroids
Ny AASraw dia miaraka amin'ny synthesis sy ny fahaiza-manao manomboka amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny Desoxymethyltestosterone vovoka (3275-64-7), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Desoxymethyltestosterone vovoka dia iray amin'ireo mpamorona steroids voalohany hividianana fanafody fampiroboroboana fanatanjahantena ho an'ny atleta sy bakteria, dia hita fa mifatotra amin'ny receptor androgen (AR) eo ho eo amin'ny antsasany mahery amin'ny DHT, ary miteraka vokatra hafa izay mahazatra ny 17α AAS, toy ny areti-tanana amin'ny alàlan'ny fanafody avo lenta sy ny hypertrophy.
Desoxymethyltestosterone volo video
Desoxymethyltestosterone vovoka ireo karazana fototra
Name: Vovony poofa (DMT) desoxymethyltestosterone
Meny fitetezana 288.46
Anarana hafa: DMT, Pheraplex, DMT, Madol, Desoxymethyltestosterone / DMT, Madol poids, Pheraplex powders
Ireo mpampiasa Madol dia afaka manantena haingana amin'ny fiakaram-baliny ary mampitombo ny lanjan'ny volany, tsy misy fitehirizana rano. Tahaka ny steroids rehetra anabolic, dia manampy amin'ny proteinina izy io, ny fiterahana ary ny fitomboan'ny sela mena (RBC).
Misy atleta misy ny BALCO nampiasa ny vovony Desoxymethyltestosterone, ankoatra ny zavatra hafa, hampitombo ny hozatra sy ny hery amin'ny vokatra tsara. Ireo atleta izay nandray anjara tamin'ny BALCO (ary angamba nihazakazaka i Madol) dia ny MLB sy ny Star NFL: Barry Bonds, Bill Romanowski, Jason Giambi; ary maro ireo atleta Olaimpika tahaka an'i Marion Jones.
Inona no atao hoe dosage desoxymethyltestosterone?
Ny dosia 10-30mg isaky ny andro dia mizara ho AM ary PM dia tsara, fa ny fandaharam-potoana ara-pahasalamana tsaratsara kokoa dia 3 (telo) isan'andro. Aza mihoatra mihoatra ny 50mg isanandro, satria tsy ilaina io fitambaran-kery io. Ankoatr'izay, tsy voatery ho mihoatra ny herinandro 6-8 ianao. Voalohany, ny mpampiasa vovoka Desoxymethyltestosterone dia tokony hihazona 15mg isan'andro, mandritra ny herinandro 4 fara fahakeliny, mba hamaritana ny vokatra hafa.
Ity dia tsiran-kevitra am-bava, miparitaka izay mifototra amin'ny vovony Desoxymethyltestosterone sy trenbolone:
Average Length of cycle:
Famaritana (eo amin'ny sanda -5 ka hatramin'ny 5):
Hery matanjaka: + 3
Fat Gain (Misalasala ny Fahavoazana Mainty): + 1
Fikojakojana rano: + 2
Akn: + 1
Toxicity: + 3
Ahoana ny ataon'i Desoxymethyltestosterone?
Ny poezia Desoxymethyltestosterone dia iray amin'ireo mpamorona steroids voalohany hividianana fanafody fampiroboroboana fanatanjahantena ho an'ny atleta sy bakteria, dia hita fa mifandray amin'ny receptor androgen (AR) eo amin'ny antsasany mahery araka ny DHT, ary miteraka vokatra hafa ny AAS 17α-alkylated, toy ny fahasimbana amin'ny aty rehefa nalaina tao amin'ny dosage avo kokoa, ary koa ny hypertrophy avy any ivelany.
Ny fikarohana dia naneho fa misy fiantraikany amin'ny anabolika 160% ny testosterone, nefa izy dia 60% fotsiny amin'ny androgenic. Ny ratio anabolika / androgenika dia 1200 / 187. Ankoatra izany, Madol koa dia tsy mamafy arina amin'ny estrogen.
Ny mpampiasa dia tokony hanantena ny fitomboan'ny hery matanjaka, ny fahazoana mavesatra, ary ny felana. Ny vola mivoatra ambony amin'ny 20lbs amin'ny 4-6 herinandro dia tsy mahatsiaro an'io vondrona io. Ny voka-dratsiny amin'ny ankapobeny dia ho potipotika mozika matanjaka, tsy fahampian'ny fofon-kibo, avo latsa-batana, hoditra hoditra, ary fingotra. Raha te hampihena ny vokatra toxikan'ny atiny na ny vokany hafa ny mpampiasa, dia mety hampiasaina amin'ny doses ambany ho 10mg / andro ny DMT noho ny vokatra mety.
Ny maha-zava-misy azy io dia tsy tokony hapetraka amin'ny vatana methylated hafa. Manana fiantraikany eo amin'ny androgenic moderate ny DMT, ka mety hisy fiantraikany amin'ny libido sy ny erectile. Ity vokatra ity dia mety ho afindra amin'ny alàlan'ny fampidirana DMT amin'ny testosterone na iray amin'ireo metabolites tsy misy aromatika hiarovana ny DHT.
Miankina amin'ny toerana hijeranao azy, ny DMT dia voalaza fa 2-12 imbetsaka kokoa amin'ny anabolic sy 0.4-2 amin'ny androgenic amin'ny methyltestosterone. Nolazaina fa ny DMT dia vatana voajanahary satria izy dia manana rafitra mitovy mitovy amin'ny delta 2-androstenol, fomban-drazana voajanahary amin'ny biby mampinono. Na izany aza, ny maha-hormone steroids 17aa azy dia mahatonga azy ho niova ary tsy voajanahary. Na izany na tsy izany, dia efa voadidy ao Etazonia izao.
Desoxymethyltestosterone vovoka Marketing
Manana fiantraikany hafa ny fantsom-panaon'ny Desoxymethyltestosterone
Amin'ny ankapobeny dia mety hisy vokany ratsy eo amin'ny endri-tsain'ny steroid toy ny ity, ary toy izany koa amin'ny DMT. Madol dia 17alpha-alkylated mba hiarovana ny zavatra tsy voapotehan'ny aty, ary mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny foza (kôlôsterôl). Ny soso-kevitrao dia mitaky fanampim-panafody toy ny N2Guard mba hiarovana ny aty sy ny fo aminao mandritra ireo faribolana. Ny vokatra haingana dia mety midika ihany koa ny herim-po sy ny tsy fahitan-tory, noho izany dia zava-dehibe ny manalavitra io fifandraisana io mandritra ny herinandro 6-8. Ankoatr'izany, io fanafody io dia manalefaka, hany ka ilaina ny fitsaboana fitsaboana amin'ny alina.
Ahoana no hividianana vovony Desoxymethyltestosterone avy any AASraw
Fanosoran'ny ronono Powder Desoxymethyltestosterone